ဦးသန်းရွှေ (သို့) နေပြည်တော်မင်းသားကြီး
ဗိုလျခြုပျမှုးကွီးသနျးရှေ အကွောငျးကိုရေးရသညျမှာ မလှယျကူလှ မွနျမာစာပလေောက၌သူ့
အကွောငျးတရားဝငျရေးသားတုတျဝသေော စာအုပျဟူ၍ မရှိသလောကျပငျ ဖွဈသညျ။
Labels: အထ္တုပ္ပတိ စာပေ
Labels: Myanmar APK
လောကဇာတ်ခုံ၊ ဤလူ့ဘုံ၌ မျိုးစုံကကြ ၊ မာန်မာနနှင့် ငါကရာဇာ ၊
ငါဟာသူဌေး ၊ ငါပဂေးဟု ငါသွေးတက်ကြွ ၊ လူ့ဗာလတို့ များလှဖြာဖြာ ၊
အဝိဇ္ဇာနှင့် တဏှာဘီလူး ၊ အမှောင့်ပူး၍ ကျူးကျူးကျော်ကျော် ၊
ဂုဏ်ကိုဖေါ်လျက် မော်မော် မောက်မောက် ၊ ငါတစ်ယောက်သာ မိုးအောက်တလွှား ၊
ရွှေကိုယ်လားဟု ထင်မှားမလွဲ ၊ သို့စဉ်စွဲလည်း ဇာတ်ပွဲပြီးက ၊ ပြည်ဖုံးချသော် သုဘရာဇာ ၊
မြေအောက်မှာပင် ဘာသာလူမျိုး ၊ ချိန်မထိုးပဲ ပုတ်သိုးခန္ဓာ ၊ မြုပ်ရရှာသည် ဘယ်မှာ ငါဟု ရှိအံ့နည်း။
ဗုဒ္ဓေါ အရဟံ ၊
အရဟံ ဗုဒ္ဓေါ ၊
ဗုဒ္ဓဿ ဂုဏတေဇသာ ။
သဗ္ဗသိဒ္ဓိ လာဘံ မေ ဘ၀ိဿတိ ။
*** နေစဉ် နံနက် (၉)ခေါက်ရွတ်၊ ရွတ်နိုင်လေလေ ကောင်းကျိုး ဖြာဝေလေလေ။
Labels: လာဘ်ခေါ် မန္တန်
သြောင်း-သရပ္ပကာနံ ဇာကံ ၊
အပိကံဏိ ဟိတွာ ၊ သီဝလိနာမ ၀ိကာနံ၊
အဟံ သေဋ္ဌံဖွင့် ၊ အဟံ သေဋ္ဌံဖွား၊
Labels: လက်ထိပ်ကြိုး ပြေဂါထာ
သြောင်း-ဃဋ္ဋေသိ ဃဋ္ဋေသိ၊ ကိံကရဏာ ဃဋ္ဋေသိ
အဟံ တ၀ ကာမံ ဇာနာမိ ဇာနာမိ ။
Labels: သူခိုးခြေချုပ် မန္တန်
ဧဟိ သမ္ဗုဒ္ဓါ အဋ္ဌ၀ီသတိ သမ္ဗုဒ္ဓါ
မမ ပုရေတော တိဋ္ဌတု၊
ပဉ္စဗုဒ္ဓါ မဟာတေဇာ မမသီသေ နိစ္စံ ဌိတာ။
Labels: ရှိန်ဆာယာ မန္တန်
'' ဘဝေ ၀ါဟံ ၊ ဘယံဒိသွာ ၊
ဘ၀ဉ္စ ၀ိဘဝေသိနံ ။
ဘ၀ံ နာဘိဝဒိံ ကိဥ္စိ ။
နန္ဒိစ န ဥပါဒိယံ ။''
အဟံ ငါဘုရားသည် ၊ဘဝေ ဘ၀များစွာ သံသရာ၌
ဘယံ ၊ဇာတိဒုက္ခ စသည်များတောင်း ဘေးအပေါင်းကိုလည်းကောင်း
ဘ၀ဉ္စ သုံးဆယ့်တထပ် ဘ၀ရပ် ကိုလည်းကောင်း။
၀ိဘဝေသိန ဉ္စ ၊ဘ၀ကောင်းရှာသမား တဏှာ တရားကိုလည်းကောင်း
ဒိသွာ ဧ၀ ၊ကိုယ်ပိုင်ညဏ်ဖြင့် အမှန်ကိုသိမြင်ပြီးဖြစ်၍သာလျှင် ၊
ကိဉ္စိ စိုးစဉ်းမျှသော။ဘ၀ံကောင်းလိမ့်နိုးနိုး ဘ၀မျိုးကို ။
နာဘိဝဒိံ ၊စွဲးစွဲးလမ်းလမ်း မယူမှန်းပေ။
နန္ဒိံစ၊ ဘ၀များစွာခင်တွယ်ရှာသည့် တဏှာ တရားကိုလည်းကောင်း
နဥပါဒိယံ ၊စွဲးစွဲးလမ်းလမ်း မယူမှန်းပေ။
ဘုရားရှင် နှင့် ဗကဗြဟ္မာ တန်းခိုးပြိုင်ရာ၌ ဘုရားရှင်ပုန်းကွယ်တော်မူရာ ဗကဗြဟ္မာရှာမတွေ့မမြင်၊ ထိုအခါဘုရားရှင်က ဤဂါထာတော် ကိုဟောပြတော်မူသည်။ဤဂါထာတော် ကို
ပွားများရွတ်ဖတ်သူသည် ကိုယ်ပျောက်၏။ ဘေးအန္တရာယ်ကင်း၏။ရန်သူတို့မမြင်နိုင် ဟုရှေးဆရာတို့ကသုံးစွဲးလာကြ၏။ လက်တွေ့သုံးစွဲးနေ သူများ လက်တွေ့ကိုယ်ပျောက်ကြောင်း သိရှိလာလိမ့်မည်။
ဆရာကြီး တက်တိုး၏ နကိုလီယံ
စကားနည်း၍ လူတောမတိုးချင်သော ရှက်တတ်သည့်သူငယ် ကလေးသည် ပြင်သစ်
ပြည်ကြီးအညိုးထားသော အာဃာ စိတ်နှင့်မွေးလာသူ ....
၀ိသောတ္တရီဒသာ ဒသာ တွက်ရိုး
Labels: ဗေဒင် စာအုပ်
Download>>>ဆရာဦးမောင်မောင်သန်း - အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ
India Astrology APK
Download>>> India Astrology APK
Labels: ဗေဒင် Android Application
Download>>> ရွှေဈေး APK
အပတ်စဉ်ဗေဒင်(Weekly Baydin) OT.apk
Eastern Astrology APK
မြန်မာ စာပေ အစဉ်အလာ များကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်လျက်
မြန်မာစာအုပ်များကို ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၁ (ဇင်သန်.)
စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၂ (ဇင်သန်.)
စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၃ (ဇင်သန်.)
ဆင်းရဲသောဖေဖေ ချမ်းသာသောဖေဖေ (ညီသစ်)
ညီမလေးရယ်စိုးရိမ်မိတယ် (တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်)
တန်းခူးလေနှင့်လျော့တော့သည် (တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်)
၀သန်လေချိန်မှန်ကူး (တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်)
အေးချမ်းစေသော စကားလုံးလေးများ (ဖိုးဝမောင်)
ဖြစ်တည်ခြင်း ပဓါန၀ါဒနှင့် လူသားပဓါန၀ါဒ (ဆန်းလွင်)
အချစ် လက္ခဏာ (စံ-ဇာဏီဘို)
အချစ် ဗေဒင် (စံ-ဇာဏီဘို)
နံနက် ၃နာရီ (ဆောင်းဝင်းလတ်)
ဆူးကလေးစူးတယ် ခူးမယ် (ဆောင်းဝင်းလတ်)
အမှတ်တရရွှေ ၆၀ (၀င်းငြိမ်း)
သွေး (ဂျာနယ်ကျော် မမလေး) ***
ဝေေ၀ရီရီ ၀တ္တု (ဇော်ဇော်အောင်)
၀တ္တုတိုများ ၆ (မစန္ဒာ)
ဟာသများလက်ရွေးစင် ၂ (မောင်ကောင်းထိုက်)
ဟာသများလက်ရွေးစင် ၁၄ (မောင်ကောင်းထိုက်)
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ် အိုင်ဒီယာစီးပွားရေး (မောင်စူးစမ်း)
ထူးအတွေ.ကြုံအဆန်း တစ္ဆေဇာတ်လမ်းများ (ဒေါက်တာအောင်ကျော်)
တွေ.ရကြုံရ ရှတတလေးတွေ (အီကြာကွေး)
မီးရောင်အောက်ကိုဝင်လျှင် (မိုးမိုး အင်းလျား)
ဆားလင်းနှင်းမောင်နှင့် ဘမျိုးဘိုးတူ ဘယ်သန်ဘမှန် ပထမပိုင်း (မင်းသိင်္ခ)
ဆားလင်းနှင်းမောင်နှင့် ဘမျိုးဘိုးတူ ဘယ်သန်ဘမှန် ဇာတ်သိမ်း (မင်းသိင်္ခ)
မ” တတ်ပါ့” (မင်းသိင်္ခ)
ဖရန်.(ဇ)ကာ(ဖ)ကာ၏ စာ (မြင့်သန်း)
ပြောရင်းပြောနေမည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (နန္ဒာသိန်းဇံ)
အိုင်ဒီယာ အက်ဆေးများ (နေ၀င်းမြင့်)
တစ်မျိုးညာနွဲ. သွေမဖယ် စိုးပါနဲ.မေရယ် (နွမ်ဂျာသိုင်း)
ပန်းပွင့် ခရေနှင့်အခြားဝတ္တျုတိုများ (မစန္ဒာ)
အောက်စ်ဖို.ဒ် တက္ကသိုလ် ခရီးသွားမှတ်တမ်း (သိပ္ပံမောင်ဝ)
မြတ်ဗုဒ္ဓ ဒေသနာ (ဒေါက်တာဝါလ်ပိုလာ)
အဖြူ (ဂျာနယ်ကျော် မမလေး)
ခေတ်သစ်တစ်ခု၏အစ၊ အဓိပ္ပါယ်များ၏အဆုံး (မင်းခိုက်စိုးစန်)
အစီရ၀တီ ကုဏ္ဍလကေသာ (ချစ်ဦးညို)
မှ တစ်ဆင့် (မိုးမိုးအင်းလျား)
ပျောက်သောလမ်းမှာ စမ်းတ၀ါး (မိုးမိုးအင်းလျား)
သိက္ခာရှိတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး (မိုးမိုးအင်းလျား)
ဝေဒနာ ကြာနီပွင့် (မိုးမိုးအင်းလျား)
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ လွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓာတ်မျိုးစေ့ချခဲ့သူ (ဦးဘရင်)
ရှေးဘ၀ နောက်ဘ၀ ဗုဒ္ဓ မဝေဖန် နှင့် ဓမ္မစာစုများ (၀င်းသိန်းဦး)
ငှက်တွေ ဆောင်းမခိုမီ (ငြိမ်းအေးအိမ်)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁) အပိုင်း က (ဦးနု)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁) အပိုင်း ခ (ဦးနု)
အဟိတ်- – - ၀တ္တုဇာတ်လမ်းများ (သိပ္ပံမောင်ဝ)
ရတနာ လိုဏ်ဂူ (နတ်နွယ်)
ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ. ရင်ခုံသံ (၀င်းဝင်းမြင့်)
ဥာဏ်ပညာ ထက်မြက်သူတို.လက်စွဲ ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)
အနှစ်၃၀ ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)
သိပ္ပံမှသည် သစ္စာဆီသို. (ချစ်ငယ်)
ညမဖတ်ရ (သို.မဟုတ်) သွေးစုပ်ရောဂါ (ဒဂုန်ရွှေမျှား)
ထမင်းလုံး တစ္ဆေ (ဒဂုန်ရွှေမျှား)
၀ိညာဉ်၏ အရိပ် (ဒဂုန်ရွှေမျှား)
သင်္ဘောပျက် ခရီးသည် ခုနှစ်ယောက် (ဒဂုန်ရွှေမျှား)
ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သူ (ဒဂုန်ရွှေမျှား)
ငယ်ကချစ် အနှစ်တစ်ရာ (ဒဂုန်ရွှေမျှား)
ဘ၀တစ်ခုအမှတ်တရ (ဆွေမင်း၊ ဓနုဖြူ)
အရှေ.မြို.ရိုးမှ မိုးရေစက်များ (တာရာမင်းဝေ)
ကိုယ့်လက်နဲ. ဖမ်းမိတဲ့နဂါးငွေ.တန်း (တာရာမင်းဝေ)
အထဲသို.၀င်လော့ ဘာကြောင့်ရပ်နေသနည်း (တာရာမင်းဝေ)
မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ (သုမောင်)
ရွှေဘုံသာ လမ်းပေါ်မှာ (ဦးလှဝင်း)
တာတေ စနေသား (ဦးနု)
HIV မှတ်စုများ ၂၀၀၄ (ဒေါက်တာသီဟ)
ကဗျာများ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) *****
ယောနသံ ဇင်ယော် (ဦးဘသန်း)
အိပ်မက်အမျိုးမျိုးနှင့် အသားလှုပ်နိမိတ် အိပ်မက်အမျိုးမျိုးနှင့် အသားလှုပ်နိမိတ်ကျမ်း Download>>> အသားလှုပ်ကျမ်း
မန္တန်​အမြု​တေကျမ်း Download>>> မန္တန်​အမြု​တေကျမ်း
အိမ်မက်ကျမ်း APK အိမ်မက် မက်ပြီး ဗေဒင်ဆရာကိုမေးစရာမလိုတဲ့အိမ်မက်ကျမ်း APK Phone ထဲတွင်ချက်ချင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ Download>>...
လိုတရပုတီးစိတ်နည်း ဘုရားဂုဏ်တေ်(၉)ပါးဖြင့် ဂြိုလ်တိုင်ခွင်ဘုရားများအား ပုတီးစိတ်ပူဇော်ပုံ ၁။တနင်္ဂနွေနေ့ ဂြိုလ်သက်( ၆ )နှစ်ဖြ...
နေမိတ္တက၀ိဇ္ဇာကျမ်း မောင်းထောင်း သာသနာပိုင် ဆရာတော်ဦးနိဂြောဓ ပြုပြင်စီမံသည့် အာကာသသျှတ္တရကျမ်း၊ ကျွန်တော်အားမိတ္တူပေးခဲ့သည့်...
အင်္ဂဝိဇ္ဇာယတြာဓာတ်ရိုက်အလင်းပြ Download>>> ဣန္ဒဝံသ-အင်္ဂဝိဇ္ဇာယတြာဓာတ်ရိုက်အလင်းပြ
ကိုင်ရိုလက္ခဏာဟော Download>>> ရွှေလမင်း-ကိုင်ရိုလက္ခဏာဟော
မျက်နှာအကဲခတ်အတတ်ပညာ Download>>> မျက်နှာအကဲခတ်အတတ်ပညာ-ညီညီနိုင်
ကန်တော့ပွဲဋီကာ Download>>> ကန်တော့ပွဲဋီကာ-အနန္တသစ္စာပြုစုသည်
ဦးသန်းရွှေ၏ယတြာများ Download>>> ဦးသန်းရွှေ၏ယတြာများ
This Blog QR Code
7Day News သတင်းဂျာနယ်
​ ဗေဒင် Android Application (2)
၀ိသောတ္တရီဒသာ ဒသာ (1)
၀ိသောတ္တရီဒသာ ဒသာ တွက်ရိုး (1)
၂၀၁၅ခုနှစ်​ ၉လပိုင်း ၁၃ရက်​ ​နေကြတ်​ (1)
Astrology APK (5)
Jyotishya Deepika ကေပီ ဗေဒင်ဆော့ဝဲ (2)
Myanmar APK (8)
ကိုးစနေရဲ့ သိဒ္ဓိ (1)
ကျန်းမာရေး တြင်းများ (1)
ခုနှစ်နေ့ ဘုးရားရှိခိုးနှင့် ဆုတောင်းအမျှဝေ (1)
ငလျင်ကြိုတင်သတိပေးဖုန်းဆော့ဝဲ Alarm (1)
ငလျင်များနှင့် နေထိုင်ခြင်း (1)
တိုင်းရင်းဆေးပညာ စာအုပ်များ (5)
နက္ခတ် တို့တည်နေရာများ (1)
ပရာသရ ဆရာကြီး၏ မိန့်မှာချက် (1)
ဗုဒ္ဓဘာသာ စာအုပ်များ (6)
မင်္ဂလာ နာမည်ပေးနည်း (1)
မဟာဘုတ် APK (1)
မြန်မာ့ရပ်ရွာအခြေပြု ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမူ လက်စွဲစာအုပ် (1)
မြန်မာ့ရပ်ရွာအခြေပြု ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမူ လက်စွဲစာအုပ်-၂ (1)
ရက်ရာဇာ ပြဿဒါးရွှေးနည်း (1)
ရှိန်ဆာယာ မန္တန် (1)
လက်ထိပ်ကြိုး ပြေဂါထာ (1)
လာဘ်ခေါ် မန္တန် (1)
သူခိုးခြေချုပ် မန္တန် (1)
အထ္တုပ္ပတိ စာပေ (4)
အပြာရောင် လ (1)
အိမ်ထောင်ရေးရာ အဟောများ (1)
ကေပီ K-P Natal ဆော့ဝဲ (1)
ကေပီ-ဆော့ဝဲ P.V.R. (1)
​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ ၏ဇာတာ (1)
နေ့ အလိုက်ပြုလုပ်နှိင်သောကိစ်္စများ (1)
ဗေဒင် Android Application (21)
ဗေဒင် စာအုပ် (23)
ဗေဒင် ဟောစတမ်းရေးသားနည်း (1)
ဗေဒင်ပညာရှင်၏ အရည်အချင်း (1)
ဓမ္မ စာ​ပေ ပြန့်​နှံ့ ​စေမည်​
ငါ့မှာရိက္ခာ​တွေ ရှိပြီလား - "ငါ့မှာ ရိက္ခာတွေ ရှိပြီလား?" ***** တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့ အရွယ်ရလာတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဘုန်းကြီးတို့ဘဝဟာ သစ်ရွက်ဝါဖြစ်လာကြပြီ.. ကြွေမယ်..မကြာခင်.. လေပြည်ကလေးမတို့လ...
iTools3- *iTools3* *iTools3* *Download>>>iToolsSetup3.4.2.2.exe*
ငွေ နည်းနည်းနဲ့ အလုပ် စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီ နည်းလမ်းလေး (၈) ခုကို သိထားသင့်ပါတယ်… - စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များဟာ အောင်မြင်နိုင်လောက်တဲ့ စီးပွားရေးအိုင်ဒီယာများ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်တဲ့ စွမ်းအားမရှိတာကြောင့်ေ...